Dịka onye na-azụ ahịa, nke ahụ na-atụ egwu. Chee echiche banyere ya - ọ bụ ọrụ anyị ịmepụta ndị na-eduga ma zụlite ha. Ọ bụrụ na anyị na-atụgharị 4% naanị, mgbe ahụ ọ ga - abụrịrị na ndị ọrụ c-ọkwa anyị anaghị enwe obi ụtọ na anyị ma ghara ịdị njikere itinye ego na mbọ anyị. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ a, nke a abụghị n'ezie ma ọlị.
Nsogbu zuru oke na ụwa dijitalụ nke oge a na-akwado ahịa na ahịa. Na omenala, ndị a abụwo ngalaba abụọ dị iche iche. N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha dị ma ọ bụ na ha anọghị n'ọgbọ ọhụụ, ọ dị mkpa na atụmatụ ahịa na atụmatụ ire ahịa na-adaba ma nwee usoro a na-ahụ anya ka nke ahụ wee bụrụ na enweghị aka na enweghị oge. Azụmaahịa ahịa bụ ụzọ isi mee nke a. Ahịa na-eziga ahịa adreesị ozi-e ọhụụ ọhụrụ, ahịa na-agbakwunye ha na sistemụ ahụ, usoro akpaaka ahịa na-emepụta ma na-agbado profaịlụ ndị ahịa, ndị abụọ ahụ nọkwa “ugbu a” gbasara ihe atụmanya na-eme yana mgbe ha na-eme ya. Nke a abụghị ọrụ ọrụ mgbe niile, mana ọ bụ ntọala maka ihe nwere ike ịbụ ụzọ ịga nke ọma maka imechi ọtụtụ ụzọ maka azụmaahịa.